Kala Vernac Archives - Kalabash Media
Category: Kala Vernac
25th April 2017 Kudzie	Kala Vernac, Vernac	42 Leave a comment
By King Kandoro
Irori coin ndiro rakabata mhuri yekwedu
Irori coin rinofanira kubhadharira mwana mari yechikoro
Rinofanira zve kuzotengera mbuya mushonga wemeso
Rinofanira zve kuzokwana usavi nekaupfu kanhasi, namangwana
Irori coin rikashaikwa panenge patosunama
Rakazomboshaikwa paya tete nababa vakapumana huroyi
Kubva ipapo hatina kuzombodzokera kumusha
Ini ndasuwa kuona mbuya
Asi baba vanoti hazvigoni nekuti irori coin harikwani kukwira bhazi
Ndakavabunza kuti seizve,
imi mave nemakore makumi maviri muchishanda kumine
Vakanditora vakaenda neni padivi
Vakati mwanangu, zvondokuudza izvi ndezvedu tirivaviri
Irori coin ndiro rega rasara muhombodo
Vekubasa vakandiudza kuti ndichiregera kuuya iwowu musi wechishanu
Usazoudze mai vako ndisati ndaronga zano
Ko baba aya mavanga manga morwa here?
Aiwa, mwanangu, ndakazvuzvurudzwa panze kuprivate lounge
Mushure mekunge ndakandira mumwe wevatambi irori coin
Kwai unoda kutikuvadzira vatambi vedu
Irori coin rine simba guru kwazvo
Rinogona kuita kuti upenyu hwako upfave
Asi chandinoda kuti kuti uzive pamusoro peirori coin ndechekudayi
Irori coin haridi homwe dzemubhero, rinosiya raboora
Irori coin rinoita kunge rinofanira homwe dzevamwe kudarika dzevamwe
Irori coin ukaenda naro kusoccer bet unogona kuswera wave nemacoin makumi
Chandinoda kuda ubatisise ndechekuti
Irori coin kana rapinda muhomwe mako wona kuti harisi kubuda
Chero imi mukoma vari muHiace wonayi kuti maramba muchitiza
Nekuti kana vakubatayi havatori riri rimwe
Vanenge vachida kukusiyai mumwe rimwe.
Irori coin ndiro raita kuti nditedembe kudai
Ndine chivimbo pane achanditenda nerimwe coin
Kuvhota kumbori ne basa rei? | #Ivote4PeaceZW
13th February 2017 Munya	Kala Vernac	33 Leave a comment
By Rolland Lunga
Kuvhota kumbori nebasa rei? Takaona vamwe vachi vhota asi hapana hapana! Zvimwe ndisu tisingazive kuti vhoti inorevei.
Maelections apfura handina kuvhota asi ndaitaurisa kuti ndoda ani. Zvakafanana nanhasi totaura vatinoda nemafungiro atinoda asi sema youth hapana zvatinoita kuti tidaro.
Kuvhotera munhu kumuvimba kuti ndakupa chindipawo, chindipawo raramo irinani. Ndiwe watati utimiririre. Ratidza leadership.
Manje vese vataida zvavasina zvavakatiitira toita sei? Sema youth ngatiitei vamwe vedu vanosimuka kuda zvinzvimbo zvehutungamira mushure mazvo ngatisimbisanei ku register ku vhota. Ikodzero yangu ikodzero yako kusarudza watada atungamire. Hazvisi zvekungotaura chete.